Soo Iibso Soosaarayaasha Immunoglobulin G (IgG) - Kiimikada Phcoker
Marka aad aad ugu yartahay immunoglobulins-ka dhiigaaga waxay ku siinaysaa fursad weyn oo ah inaad qaadsiiso infekshanno In aad u badan haysato could.
Fiidiyowga Immunoglobulin G (IgG)
Magaca Kiimikada N / A
Color Cadaan-cad ilaa Jaalaha
SOlubility 100% biyo fadhiya
Application Cabitaan, Kaabista caafimaadka ragga, Kaabista nafaqo darrida ragga, Cuntada caafimaadka, cuntada lagu daro, iwm.
Antibodies-ka waa borotiinno unugyadaada difaaca jirka ay sameyaan si ay ula dagaallamaan bakteeriyada, fayraska, iyo kuwa kale ee waxyeellada leh.
Markaad haysatid immunoglobulin yar oo dhiigaaga ku jira waxay ku siineysaa fursad weyn oo aad ku qaadsiin karto cudurada. Markaad yeelato wax badan waxay la macno noqon kartaa inaad leedahay xasaasiyado ama habka difaaca jirka ee xad dhaafka ah.
Immunoglobulins waxay xirataa, aqoonsataa oo burburisaa bakteeriyada, sunta, fayraska, iyo sunta kale. Jidhku wuxuu soosaaraa unugyada ka hortaga antigens-ka. Markaa, marka ku xigta ee antigen jirka galo, waxay kicineysaa soo saarida unugyada kahortaga cudurada.
Muhiimadda immunoglobulins waxay fure u tahay fahamka sababta kordhinta korantada maqaarka ay muhiim ugu tahay caafimaadka aadanaha. Immunoglobulins iyo waxyaabo kale oo ka hortagga firfircoon ee ku jira colostrum colostrum ayaa la muujiyey inay ka caawinayaan yareynta halista cudurka isnimbarka, faafa, iyo idiopathic (sabab aan la garanayn), oo ay ku jiraan: Chicken pox pat Cagaarshow ， Jadeecada.
Dambas, dambas cusub oo bulukeeti ah ayaa ka kooban dhowr nooc oo immunoglobulins ah: IgA, IgG, IgM, IgE, IgD
immunoglobulin g (IgG): Waxaa loo adeegsaday in wax looga qabto dhibaatooyinka nidaamka difaaca iyo caabuqa. Dambarrada 'Bovine colostrum' wuxuu ka kooban yahay IgG wax ka badan immunoglobulin kale.
waa maxay Igg?
Unugyada difaaca jirka ayaa ah qeybaha ugu waaweyn ee difaaca jirka. IgG waa nooca ugu weyn ee antibody laga helo dhiiga iyo dheecaanka ka baxsan jirka, taas oo u ogolaaneysa inay xakameyso infekshinka unugyada jirka. Adoo xiraya noocyo badan oo cudurka keena sida fayraska, bakteeriyada, iyo fungi, IgG wuxuu jirka ka ilaaliyaa infekshinka. Unugyada difaaca jirka waxay kaa ilaalinayaan infekshinka adoo “xusuusanaya” jeermisyadii aad horay u soo gaadhay.
Heerka caadiga ah ee IgG, heerarka serum IgG badanaa waa ka yar yihiin 200 mg / dL, iyo heerarka IgM iyo IgA waxay ka yar yihiin 20 mg / dL. Tirada unugyada dhiiga ee CD19 + B-unugyada ayaa caadi ahaan ka yar 0.1%.
IgG waa immunoglobulin kaliya ee ka gudbiya hooyada una gudbiya uurjiifka si uu ugu gudbiyo xasaanadda.
Waa maxay calaamadaha cillad la'aanta 'IgG'?
Dadka leh yaraanta IgG waxay u badan tahay inay cudurro qaadaan. Yaraanta IgG waxay ku dhici kartaa da 'kasta.
Baadhitaan dhiig oo cabbira heerarka immunoglobulin ayaa ah tallaabada ugu horreysa ee lagu ogaanayo yaraanta IgG. Tijaabooyin aad u dhib badan laakiin aad muhiim u ah ayaa ku lug leh cabirka heerarka unugyada jirka ee ka hortagga tallaallada qaarkood.
Caabuqyada badanaa saameeya dadka qaba yaraanta 'IgG' waa:
Infekshannada sanka iyo cudurrada kale ee neef-mareenka
Caabuqyada keena cuncun xanuun
Marar dhif ah, oo daran iyo infekshano nafta halis geliya
Dadka qaarkood, infekshannada waxay sababaan nabarro dhaawac u keenaya marin-haweedka iyo shaqada sambabbada. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa neefsashada. Dadka qaba yaraanta IgG waxay sidoo kale badanaa ogaadaan in cudurka sambabka iyo tallaallada hargabka aysan ka horjoogsan inay qaadaan cudurradan.
Faa'iidooyinka IgG Powder
IgG Powder waa il nadiif ah, il laga helo caano laga helo immunoglobulin G (IgG) oo loo heli karo cunto dheeri ah. Qaaciddadan 'IgG formula' waxay ka caawineysaa inay ilaaliso nidaamka difaaca caloosha oo caafimaad qaba iyadoo ku xireysa tiro badan oo ah microbes iyo sunta ku jirta gut lumen.
Budada 'IgG' waxay siisaa Immunoglobulins-ka Xasaasiyadeed ee Aan Allergenic ahayn si Ay u Hirgasho Immunity
Budada IgG waxay caawisaa Joogtada Miisaanka Maqaarka
Budada IgG waxay taageertaa Caafimaadka GI Barrier Health and Intertified
Budada IgG waxay caawisaa Joogteynta Balance Caadiga ah
Budada IgG waxay ka caawisaa isku dheelitirka shakhsi ahaaneed iyo ilaalinta howlaha difaaca jirka.
Budada IgG waxay ka caawisaa la dagaalanka Bakteeriyada: Immunoglobulins waxay kaa caawin kartaa yareynta halista ay keento microbes waxyeelada leh, taas oo ka hortageysa ama yareyneysa arrimaha caafimaadka qaarkood.
Budada IgG isticmaalka iyo codsiga
In kasta oo immunoglobulin kaabis ah aysan qayb caan ka ahayn suuqa, haddana waxaa jira qaar ka mid ah badeecadaha tartamaaya. Rajada laga qabo is-dhaafsiga immunoglobulin wuxuu u muuqdaa mid wanaagsan.
Baadhitaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in lgG ay wax ku ool u noqon karto ka takhalusida sheyga ku jira marinka caloosha. Cudurka damnuhu ma aha oo kaliya inuu kujiro tiro badan oo lgG ah, laakiin sidoo kale dhowr arrimood oo faa'iido u yeelan kara nidaamka difaaca jirka.
IgG budada waxay ku kordhisaa immunoglobulins urursan si kor loogu qaado difaaca xuubka, dhiiri galinta hababka hagaajinta mindhicirka waxayna gacan ka geysaneysaa dheelitirka microbial.
IgG iyo Fcγ Receptors ee xasaanadda gudaha iyo kacsanaanta Tomas Castro-Dopico, Menna R. Clatworthy Front Immunol. 2019
Dhismooyinka tallaalka waxay kicin karaan qaas, T-ku-tiirsanaan, autoanti-IgG soo-saare antibody ee jiirka J Exp Med. 1985 Jan 1
Kinetics of immunoglobulins gaar ah M, E, A, iyo G oo ku dhasha infakshanka cytomegalovirus ee ka hortagga-qabashada anti-qabashada enzyme-enzyme-immunosorbent assay. SL Nielsen, I Sørensen, HK Andersen J Clin Microbiol. 1988 Apr; 26 (4): 654–661.
Saamaynta Saddex Cunto oo Cudur Daar ah oo ku Saabsan Gudbinta Joogtada ah ee Tallaalka iyo Caafimaadka preweaning Health ee Calves ee Caloolka Kalluunka ee California ka dib Tababbarka Maaraynta KorantadaDeniece R. Williams, Patrick Pithua, Angel Garcia, John Champagne, Deborah M. Haines, Sharif S. Aly Vet Med Int. 2014; 2014: 698741
Qiimaynta saameynta iftiinka ultraviolet ee ku sumoobay bakteeriyada ku dhexjirta caano iyo dambar, iyo colostrum immunoglobulin G V. Pereira, ML Bicalho, VS Machado, S. Lima, AG Teixeira, LD Warnick, RC Bicalho J Dairy Sci. Qoraaga qoraaga; waxaa laga heli karaa PMC 2015 M